တပ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်မဲပေးရင်း NLD အနိုင်ရလျှင် ဆိုသော မေးခွန်းကို ပြည်သူလိုလားသည့်ရလာဒ်လက်ခံမည်ဟု ပြန်လည်ဖြေဆို ~ Myaylatt Daily.
တပ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်မဲပေးရင်း NLD အနိုင်ရလျှင် ဆိုသော မေးခွန်းကို ပြည်သူလိုလားသည့်ရလာဒ်လက်ခံမည်ဟု ပြန်လည်ဖြေဆို
3:20 PM သတင်း No comments
Hnin Wai Wai and3others shared The Irrawaddy (Burmese Version)'s post. မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
The Irrawaddy (Burmese Version) added6new photos.
(ဧရာဝတီသတင်းထောက် မေစစ်ပိုင် နေပြည်တော်မှ တိုက်ရိုက်သတင်းပေးပို့ ပါသည်)
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကို သတင်းထောက်တဦးက အတိုက်အခံပါတီ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အနိုင်ရခဲ့မယ်ဆိုလျှင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီချုပ် မည်သို့သဘောထားသနည်းဟူသည့်မေးခွန်းအပေါ်" ပြည်သူကရွေး ချယ်တာပဲ၊ ကျနော်တို့ဘာမှလက်မခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလေ" ဟုဖြေဆိုသွားသည်။
ယနေ့မနက် ၉ နာရီခန့်က နေပြည်တော်ကောင်စီ ဥတ္တရခရိုင် ဇေယျာသီရိမြို့နယ် ရှိ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး၊ အနော်ရထာ ခန်းမ မဲရုံ အမှတ် ၁ တွင် ဆန္ဒမဲလာရောက်ပေးပြီးချိန်တွင် မီဒီယာများကို ယင်းသို့ ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။